Khamri: ma caawisaa mise caqabad? | Laga soo bilaabo Linux
Khamri: ma caawisaa mise caqabad?
Si fiican ayaa loo wada garanayaa waa barnaamijkan noo ogolaanaya inaan ku isticmaalno barnaamijyada Windows-ka Linux, taas oo sida muuqata kubad ah laakiin sidaa uma badna aragtidayda.
Khamri = Waad Is Nan Emulator.
Iyada oo ku saleysan gaabinta waxaan dhihi karnaa in Khamrigu uusan aheyn emulator Windows ah Linux. Waxa khamrigu sameeyo waa nuqul Windows maktabado u gaar ah si loogu oggolaado fulinta faylasha .exe
Waa wax fiican maxaa yeelay haddii aysan kudayan ahayn waxaan ceebeyn karnaa Linux-keena maxaa yeelay waxay sameyn kartaa wax aan micno lahayn oo Windows sameeya, laakiin xitaa sidaas, Khamrigu ma fiicna gabi ahaanba.
Qof kastaa wuu ogyahay in dhammaan barnaamijyada Windows aysan ku socon Wine marka laga reebo xaqiiqda ah in haddii ay socdaan ay qaban karaan wax ka xun nidaamka waddankooda.
Laakiin tani ma aha dhibaatada ugu muhiimsan, dhibaatada ugu muhiimsan ayaa ah in Khamrigu uu ku adkeynayo dadka isticmaala inay bartaan Linux.
Qaarkood waxay u muuqan doontaa sidii dibi dhac laakiin run maahan. Aynu bilowno fikirka, markaad bedesho nidaamka qalliinka waa caadi in codsiyada la beddelo, haddii aad beddesho waxaad ogtahay inay tahay inaad intaas oo dhan barato.
Markaa haddaan adeegsanno isla barnaamijyada, waxba tari maayo inaan u leexanno Linux.
Codsiyada Windows-ka haddii ay xiran yihiin kuma socdaan falsafadda GNU / Linux
Waxba kama baranno, taas oo ku saabsan waxa ku saabsan
Sababtaas oo kale, uma baran doonno adeegsiga Linux.
Yaa raba wax, wax ayey ku kacdaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Khamri: ma caawisaa mise caqabad?
Waxa kaliya ee aan ku isticmaalo daaqadaha waa barnaamijka Blackberry ee aan ku necbahay nolosheyda oo dhan iyo Flash, laakiin midka ah in animation-ka wax laga beddelo, oo aan lagu xidhin. Ka dib isku dayo badan oo aan lagu guuleysan oo lagu maamulo Macromedia Flash oo ka hooseeya Khamriga oo aan u arko in aysan kaliya jarin, waxaan sameeyay mashiin farsamo oo waa la hagaajiyay.
Wixii dhadhan ahaan, midabbo ah ... Iyo sidoo kale, way cadahay in haddii aad mid ugudubto midkasta oo Linux ah ama aad barato ama aad waxbarto, majiro wax intaa kabadan, laakiin dad badan ayaa kaliya isbadala maxaa yeelay "saameynta isugeyntu waa qabow", "waxay dhahaan ma jiraan wax virus oo wali waan ku dabakhayaa »iyo sheegashooyinka sidan oo kale ah ...
Dadku waxay ku madax adag yihiin rabitaanka, muhiimaddu waa rabitaanka qofka inuu barto iyo in kale.
Waxaan kaliya u isticmaalaa laba barnaamij oo yaryar iyo wax kale.
Ninyahow, haddii aadan haysan kubbado badan, waan fahmay, laakiin waxaan ula jeedaa in badan oo ka mid ah kiisaska dadka, tusaale ahaan, ku rakibaya iTunes haysta Amarok iyo Gtkpod meelaha keydka ah
Nah, ma isticmaalo iTunes b Banshee, ama amarok.
Waxyadaydu waa 2 arrimood: hage dijitaal ah oo magaaladayda ah (waxaan u adeegsadaa inaan ku ogaado baska aan ka raaco dhinac ilaa dhinac kale) iyo barnaamijka geynta fog.
Yaa raba wax kharash
Waan kugu raacsanahay, laakiin Khamrigu wuxuu iga caawiyaa waxyaabo badan, waxyaabo aad u qaas u ah heerka qalabka.
Si aad u muujiso badhan. Waxaan u isticmaalaa adobe air inaan ku ciyaaro dofus iyo wakfu (iyo tijaabooyin qariib ah oo aan sameeyo) taas oo loo joojiyay Linux x86_64 (64bits) iyo waliba horumarkiisa Linux 32bits waa mid aad u gaabis ah, marka maxaa ii hadhay? Fudud, khamri way dhammaatay, dhawr taabasho oo aan leeyahay adobe adobe, codsi aniga ayaa muhiim ii ah laakiin taasi ma horjoogsanayso dhaqdhaqaaqayga nidaamka ama waxba igama qaadin, waa wax fudud oo aan u baahanahay taasna maya dheer Linux.
Man the Mierdofu $ (dambi maleh) ayaa lagu rakibi karaa nooca flash-ka mana u baahnid midaa
Sababtoo ah qof walba wuu neceb yahay shit fu. hahaha si fiican waxba uma haysto taas.
Sababtoo ah shaqaaluhu waa cunsuriyiin iyo waxyaabo badan.
Waxaan idinkaga tegayaa maqaalkan oo aan qoray ku dhawaad ​​sanad ka hor kaas oo aan diirada ku saarayo dhamaan cunsuriyadaas iyo kuwa kale, sidaa darteed halkan kuma qalloocayo
Huy adag maqaalka wuxuu umuuqdaa inay kugula dhaceen kubadaha. Shakhsiyan, waligay uma ciyaarin sababta in qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda ay ahaayeen taageerayaal balwad leh, kuwaas oo waqtigooda ku lumiyay lacagtooda oo dhan ciyaartaas dandruff. LOL
Nah, waxaan uun isku dheelitir la'aanta hormoon ee waqtigaas iyo qayb ka mid ah waxa aad leedahay
Waxaan u maleynayaa in isticmaalka ama uusan khamrigu ku xirneyn baahida isticmaalaha, waxaa jira dad nasiib daro aan sameyn karin la'aanteed codsiyada lahaanshaha qaarkood, ama daraasad ama heer shaqo, taas oo macquul ah. Waxa kale oo jira isticmaale-ciyaarayaal gamer ah oo aan noolaan karin la'aanteed ciyaarta X, dhab ahaantii badiyaa gnu-linuxeros-ka aan ogahay waxay leeyihiin laba-geesood leh Windows.
Shakhsiyan, ma isticmaalo Khamri, iyadoo codsiyada laga heli karo keydadka Trisquel aan haysto waxbadan.
Waxay ila tahay in xalka ka wanaagsan Khamrigu inuu noqon doono in daaqada $ $ lagu kaydiyo Virtualbox, laakiin taas waxaad ugu baahan tahay mashiin si casri ah oo casri ah oo wata processor oo duulaya iyo dhamaan wananka suuragalka ah Khamrigu wuxuu u baahan yahay mashiin aad u yar, laakiin waxaa lagu kala qaaday arrinta daaqadaha "ku tiirsanaanta", sida maktabadaha dll, iyo qashinkaas, sidaas darteed waa inaad si aad ah u habayso. Laba sano ka hor ayaan gebi ahaanba u beddelay Linux, waxaan kaliya u socdaa inaan ku guuleysto inaan ciyaaro ciyaartii aan jeclaa, pro evolution. Haddii aan heli lahaa kombuyuutar ka awood badan waxaan ka nasan lahaa linux, laakiin nasiib darro anigu ma haysto. Hada, sababaheygu waa doqonimo, laakiin wali waxaan dareemayaa aamin siinta softiweerka bilaashka ah, maxaa yeelay marwalba waxaan iskudayaa inaan isticmaalo (laakiin waxaan kuxirannahay sheyga flash flash-ka iyo darawalka nvidia, maxaa yeelay ikhtiyaarradeeda bilaashka ah sifiican uma shaqeeyaan). Xitaa waxaa jira wiilal barnaamijyo iyo naqshadeeyayaal ah, kuwaas oo daruuri ubaahan in laga badiyo linka si loo tijaabiyo horumarkooda barnaamijyada kale. Virtualbox, Qemu-kvm iyo Xen waxay ila muuqdaan inay ka fiican yihiin Khamriga, maxaa yeelay waad maamuli kartaa dhisme iyo nidaam kasta, ma ahan kaliya daaqadaha. Arrintan waxay xiriir dhow la leedahay falsafadda barnaamijka bilaashka ah: illaa intee ayaad isticmaali kartaa wax kasta oo 100% bilaash ah, haddii hadda laga bilaabo kernel uu leeyahay nambarka binary ee lahaanshaha (burooyinka caanka ah), iyo dhammaan walxaha caanka ah ee aan isticmaalno waxay leeyihiin lambarkaas (ubuntu, arch, slackware, gentoo, debian + keyd la'aan, iwm). Waan sii wadi doonaa tijaabinta jeexjeexyada bilaashka ah, iyo markay soo baxdo, qalabka bilaashka ah, laakiin inta ka horeysa waa inaan dejiyaa 99% nidaam bilaash ah. Munaafaqnimada dhinac iska dhig, sax? Maxay kula tahay
Runtu waxay tahay in xorriyadayda iyo inaanay waxba i khusaynaynin illaa intaanan dareemin xadhig, gabi ahaanba ma aqaano sida wax loo sameeyo barnaamijna kuma biirin karo koodhka, laakiin dad badan ayaa daneeya arrintaas taasna waa sababta aan u iri
Marnaba ma awoodi doono inaan isticmaalo 100% softiweer bilaash ah iyo sabab aasaasi ah. Laptop-kaygu wuxuu leeyahay aaladda Broadcom oo maamusha wireless-ka. Midkani wuxuu ubaahan yahay qalab-bilaash bilaash ah inuu shaqeeyo (taasi waa, la'aanteed ma lihi xiriir Wi-Fi ah).
Dhammaan xagjirnimadu way xun yihiin ... 😉
Taasi waa sababta aanan u tijaabin doonin Trisquel mashiinkeyga.
Waan fahamsanahay in telefishanka uu sii deynayo wadayaasha furan ee Linux, ama waxaan ka fahmay wararka ku saabsan mashruuca kernel-libre, trisquel wuxuu had iyo jeer adeegsadaa noocii ugu dambeeyay ee kernel-ka. Saaxiib ayaa ii sheegay in distoorkani uu si wanaagsan ula dhaqmayo isku xirnaanta shabakadda, sidaa darteed si kalsooni leh ayaan u siiyaa isku day. Waxaan isticmaalaa salix os distro, laakiin waxaan isku dayay trisquel oo sifiican ayey u shaqeysaa, wayna kafiican tahay ubuntu.
Hadaad ula jeedo xirmada brcm80211, waxay kaliya u shaqeysaa BCM4313, BCM43224 iyo BCM43225. Laakiin taydu waa BCM4322.
Iyo "dhulka dhexe" waa been abuur.
Markii aan bilaabay Linux, dib ugu soo noqoshada 2008, waxaan u isticmaali jiray Khamri munaasabadaha. Xaqiiqdii, mararka qaarkood wuxuu u sameeyay inta badan inuu tijaabiyo, si uu u arko inuu heli karo Oblivion ama MS Office inuu shaqeeyo. Waxaan leeyahay shakhsiyad aad ugu nugul "indha indheynta" iyo wax isku deynta.
Maanta, ka dib dhawr sano oo aan dunida u socday, baranayay, la qabsiga, ma sii noolaan karayn la'aanteed codsiyada aan jeclahay (Amarok / Clementine, Gimp, Dolphin, iwm), dhammaantoodna waxay ku dhasheen Linux. Waxay ka badan yihiin inay buuxiyaan shuruudahayga, sidaa darteed waxaan u arkaa naftayda mid nasiib badan arintaas.
Iyo kuwa u baahan Khamriga, waa ikhtiyaar kale, oo aan waligeed xumaan in la helo haddii duqsiyadu dhacaan.
Oo maxaad ku qabataa cayaaraha? Ilaa iyo inta laga helayo taageero waddani aqlabiyad badan, waxaa jira kaliya ikhtiyaarkaas ama in lagu kala qaybiyo Windows, iyo sida ugu macquulsan waxaan doorbidaa Khamriga (ama sidoo kale sida ay yiraahdaan, MV ee leh Windows ee VBOX), oo aan loo isticmaalin iga dhigaysa "quudhso" Linux.
Sidoo kale, uma baahnid inaad ahaato "xagjir" barnaamij bilaash ah: marka laga reebo ciyaaraha, oo aan u isticmaalo bilaash iyo lahaansho labadaba, waxaan doorbidaa inaan isticmaalo kii hore markay tahay noocyada kale ee softiweer. Si kastaba ha noqotee, aniga ilama ahan aniga, ugu yaraan hadda, in loo isticmaalo kaarka sawirada (gaar ahaan ATI) darawalada qaar ee ay sameeyeen bulshada, dhibaatooyinka ay iyagu naftooda keeneen darteed.
Ku jawaab Hokasito
In la ciyaaro waxaa fiican in la iibsado Saldhigga Ciyaaraha, uma arko kombuyuutarka taas
Waan kuugu raacsanahay. Ma rabtaa inaad ciyaarto? Isticmaal konsol!
Waxaan u isticmaalaa VirtualBox halkii aan ka isticmaali lahaa Khamriga. Khamrigu wuxuu kudhamaadaa jahwareerka ururada faylkaaga runtiina ma jecli inay isku daydo inay maamusho EXE arintaas. Waxaan ka doorbidayaa Windows sanduuqa si fiican loo kontaroolo, maadaama ay tahay inaad ilaaliso xayawaanka halista ah.
Uma baahnid inaad noqotid taageerayaal, in ruwaayadda 3 ay ku kacayso € 299, qof walbana uusan ku lahayn, waxaan doorbidayaa in daaqado 7 leh ciyaaro halkaas oo ay had iyo jeer si fiican ugu ordi doonaan, sidoo kale in ciyaaraha lagu ciyaaro ay ka qaalisan yihiin oo ay socdaan dusha sare ee ciyaarta Sidoo kale waa mid gaar ah, markaa inta u dhaxeysa isticmaalka ciyaarta ama daaqadaha, ma jiro wax farqi ah.
Waxaad ku iibsan kartaa gacanta labaad ee Ciyaarta oo qiimo badan ayaa kaaga baxa.
Ciyaaraha wax, haa, in lagaa qaado wax ka badan € 60 ciyaar kasta waa dhac laakiin waa la jabsan karaa
Qufac qufaca .. Qof ma dhahay Hack?
Old haddii aad doorbideyso inaad bixiso daaqa ugu fiican.
Aan aragno, haddii ay ahayd inaad u isticmaasho Hasefroch jahannamada, maxaad doorbidi laheyd, bixi 300-ka qaddar € ee u qalma ama jabsada?
Hagaag waa isku mid
PS: Waan ku wareersanahay markaan bixinayo jawaabta, waxay u socotaa elav hore
Taasina waa sababta markaa aan u joojin doonno isticmaalka Khamriga, maxaa yeelay Cayaartu way ka fiican tahay? Oo maxaan ku qabannaa dhammaan cayaaraha kombiyuutarka? Ka waran ciyaaraha indie? Iyo kuwa shirkadaha kaliya u shaqeeya PC, sida Blizzard, in la magacaabo wax yar? Ma jirtaa qaab kasta oo looga ciyaaro Linux, sax?
Taasi waa sida aan qabo laakiin qof kasta oo sameeya wuxuu rabo
Waxaan u isticmaalaa kumbuyuutarka inaan ku ciyaaro, maalmahan waxaan siinayaa Open Arena iyo Dungeon Crawl wax badan, in kasta oo aan sidoo kale haysto Wii aan ku ciyaaro. Labaduba si siman ayey igula maaweeliyaan, qaabkooda, dabcan.
Waxaan qirayaa inaad adiguna xoogaa sax tahay.
Tilmaan u fidi, maxaa yeelay qalabka guriga ayaa la abuuray oo waxaa jira kuwo badan, iyo dhammaan dhadhanka iyo midabada cayaaraha. Xitaa taleefannada gacanta waxay leeyihiin ciyaaro xiiso leh, laakiin maya, aniga ayaa iskudarsamaya, aniga isma arko anigoo kumbuyuutarka ku ciyaaraya (marka laga reebo dhowr ciyaarood oo flash ah oo ka socda Nyancat, Sims iyo waxyaabo ka socda Newgrounds)
Si aad u ciyaarto ciyaaro hore ama ciyaaro cusub laakiin karti leh, markaa konsolle ayaa ka fiican. Haddii kale kombuyuutar lama tartami karo ...
Sida Chango oo kale, sidoo kale waxaan u arkaa hufnaan ka sii fiican haddii mashiinkeennu u oggolaado, khamrigu kuma jiro nidaamkeyga laakiin haddii daaqado akhlaaqda leh oo aan kaliya u isticmaali jiray Pokerstars, hadda hadda waxaad dhigi kartaa jalaatada Android 4.0 daaqadaha sidoo kale waan tijaabin doonaa. Haddii isticmaaluhu go'aansado inuu rakibo gnulinux distro, uma maleynayo inay khamrigu faragelin doonaan isaga, si tartiib tartiib ah wuu u joojin doonaa isticmaalkiisa haddii Linux uu xirto.
Haa hadaan ku dhaho ma ahan inaan taageersanahay Oracle, iyo Wmware, markaan helo wax ka sii fiican ayaan dooran doonaa xulashadaas mustaqbalka.
runtu waxay tahay inaanan weligay jeclayn Khamrigu, haddii aan wax ka qabanayo Windows si fiican ... waan ku sameeyaa Windows!
Tani waxay u socotaa qof walba:
Halkan waxay igagala hadlaan ciyaaraha, laakiin waa wax ka duwan.
Ciyaaraha xitaa way ka sii xun yihiin maxaa yeelay dhalasho ahaan waxaad horeyba ugu baahnayd qaab muuqaal ah oo loo yaqaan 'ciborium', waxaadna qaadataa mid yar oo qalad ayaa ku dhaca.
Bal qiyaas cadaalad iyo Khamri, heh heh
hahahaha maxaa mania loo rumaystaa inay dadku u isticmaalaan linux maxaa yeelay waxay jecel yihiin softiweer bilaash ah? Tusaale ahaan, waxaan u beddelayaa Linux-ka horumarinta webka, horumariye ahaanna waa inaan ogaadaa haddii iyo haddii qaaciddada LAMP (linux, apache, mysql, php), aysan jirin waddo kale, oo aan ahayn qalab bilaash ah, nasiib wanaag waxaan si fiican u maareeyaa Iyada oo loo yaqaan 'SublimeText2' ama tifaftire kasta oo qoraal ah, iyo haddii maalin uun aan baahi u qabay DW, waa hubaal in Khamrigu i caawiyo, aakhirka isticmaalaha ayaa si fiican wax ugu qabta waxa uu dareemayo inuu ku qanacsan yahay, sidaa darteed haddii adeegsaduhu doonayo inuu ku daydo, wax u yeelo, ama isticmaal Khamri, isaga u fiican !!!
anigoo ka hadlaya daaqadaha, irfanview wuxuu adeegsanaayay daawade fudud laakiin aad u awood badan, wax walba wuu haystay wax culusna ma lahan, maxaa bedel ah oo aad ku talinaysaa? Waxaan isticmaalaa CruchBang, oo ah nooc ka mid ah Debian….
Waxaa jira sababo badan oo loo adeegsado Linux-ka midkoodna waa taas.
Openbox ma adeegsato maktabadaha waxkastoo aad isticmaali karto barnaamijyada GTK + iyo Qt.
Waxaan kugula talinayaa QIviewer
Haddii ay tahay maaddo leh nuunasyo badan, kiiskeyga ku dhowaad dhammaan codsiyada waxaan ka helay bedello iyo kuwa aad u wanaagsan oo ku jira Linux. Xaaladaha kale waa inaan isticmaalaa Barnaamijyo gaar ah, sida Pic-c ccs iyo Isis-Proteus waxaan u isticmaalaa kombiyuutar kumbuyuutar leh XP. Waxaan haystaa qayb kale oo leh W7 markaan u baahanahay inaan isticmaalo Autocad culus iyo xafiiska. Marka la eego ciyaarta oo guba marxaladdaas, laakiin waxaan doorbidaa PC-Gamer marka loo eego konsole.
Haddii aadan rabin Khamri, ha rakibin. Waxaan rajaynayaa in Khamrigu sii wado inuu horumaro oo uu wanaagsanaado, waxaan u arkaa inay tahay hub aad u xoog badan oo ka dhan ah keli ahaanta Microsoft. Doodaha geesinimadu waa kuwo carruurnimo.
Haddii aad wax dhihi doonto wax ku dheh sabab sabab intaad ii qalmin laheyd inaan yeesho feker ka duwan aniga sidii dad badan ay ku sameeyeen isla qoraalkan.
Haddii aadan rabin Khamri, ha rakibin
Waxaan horeyba ula joognaa weedha sixirka. Ma dhahay waan rakibay markaa ha dhihin waxyaabo aanan sheegin.
Aynu aragno haddii aan hoos u dhigno qiiqa anigu uma ihi dibi dhal.
Maaha u qalmid, waa xaqiiqo. Iyagu waa sababta dhalinta qaangaarka ah. Xukunka ugu dambeeyaana wuxuu udhaxeeyaa dhamaan faallooyinkaaga / qoristaada, way adagtahay inlagukeero waxyaabo aan jirin oo macquul ah sababaynta. Khamrigu wuxuu ufiican yahay Linux-yada waxa barashada adag ka dhigaya Linux run maahan. Uma imanayso heer ka mid ah qalabka wax lagu buuxiyo oo waxaad isticmaali kartaa PC la'aanteed. Markay dadku rakibaan, waxay u sameeyaan inay u adeegsadaan codsi exe ah oo ay u baahan yihiin, maahan inay caajis yihiin inay wax bartaan.
"Haddii aadan rabin Khamriga, ha rakibin" wax walba ayaa u socda qof walba oo ku dhaleeceeya Khamriga.
Haddii aadan haysan wax xulasho ah, haa, laakiin weli waxaa jira codsiyo aan ku socon Khamriga ama kuwa si xun u shaqeynaya.
Waxaan u arkaa in haddii ay jirto beddel Linux kale ah, ay ka wanaagsan tahay adeegsiga barnaamijka Windows-ka ee Linux, sida kuwa iTunes ku adeegsada Linux, oo leh Gtkpod, Amarok, aTunes, iwm.
Kuma doodi karo faaladan ugu dambeysa maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inaad taas ku saxantahay. Laakiin haddii qof adeegsado iTunes waa sababta oo ah waxay jecel yihiin inay ka fiican tahay kuwa kale ee Linux ka beddelan, taasi ma horjoogsanayso barashada. Waxaa intaa dheer, si aad uga dhigto codsiyada qaarkood inay shaqeeyaan, waxaad si kadis ah u barataa Aramaig. Khamrigu wuu sii fiicnaanayaa maalinba maalinta ka dambaysa codsiyada ayaa si fiican u shaqeynaya waqti ka dib. Waa inaan taageernaa mashruuca si Windows XP astaantii aad ku sidatay fikradahaaga ay u baaba'do. By habka, lilac ee sanduuqyada aad u muuqataa adiga weyn: P.
PS: Waxaan ogahay inaad u adagtahay sidii dhagax oo kale, oo aad garaacayso dharbaaxo la'aan, waxaad duqowday daqiiqad kasta. Waan ka xumahay ka wahsiga, waxaan u baahday inaan qof la qasmo.
Aad ayaan u yarahay hadda, runta waxaan horeyba ugu haystaa waali lila hahahaha.
Laakiin purists tusaale ahaan waxay diidi doonaan isticmaalka Khamriga si loogu oggolaado in lagu dhigo barnaamijyo Linux ah oo ka hor imanaya arrinta isha furan.
Runtii dan kama lihi ilaa iyo inta ay aniga ii shaqeyneyso, laakiin anigu waxaan doorbidayaa asal ahaan, waxay iila muuqataa aniga "nadiif" badan.
Waxaan u isticmaalaa Khamriga Ares iyo wax kale (Waxaan isku dayay inaan rakibo Ps, waan ku guuleystay, laakiin natiijada ... cabsi leh)
naxdin leh dijo
ugu dambayntii qof ila wadaaga aragtidayda!
Ku jawaab freakware
Waxaan u isticmaalaa Wine inaan ku ciyaaro WarCraf III (DotA), wax kale oo aan u hayaana ma jiraan, weli waxaan haystaa DualBoot leh W7 inta ka hartay Ciyaaraha aan ku socon khamri, Direct3D si fiican ugama dayan, qofna ma garanayaa sababta?
Anigu waxaan ahay ciyaartooy, waan ku farxi lahaa hadaan macasalaameeyo calanka midabbada badan leh adoon guuldareysan ciyaarteyda, hehehe
Ku jawaab nwt_lazaro
Waxaan u isticmaalaa khamri, kaliya Loquendo "codadkoodu waa cajiib", laakiin waxaan la jaan qaadayaa Audacity, waxaan ku ridayaa biraawsarka Bluefish ama Bluegriffon ama Inkscape "Sozi iyo Jessyink iyo ecmascript", ama fiidiyoow leh Blender, Kdenlive, Openshot, ffDiaporama videoporama, LiVES, Kino iyo Pitivi !!
Ku jawaab Alvin
Waa hagaag aniga aniga qodobkani wuxuu umuuqdaa mid fikir ahaan aad uguxiran.
Runtii waxaan aaminsanahay in isticmaale Linux ah oo rakibaya qaybinta uu yahay qof xiise badan oo hadduu xiiseenayo waxa ugu horeeya ee uu sameyn doono uu yahay tinker ama rakibida codsiyada uu jecel yahay, waxaa laga yaabaa inuu waqti ku qaadan doono barashada haddii uusan sameyn Ma jiro qof wax bari kara, maaddaama ay badan tahay in ay jiraan shirar ku saabsan dhibaato ama mowduuc, adeegsadaha Windows-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu rakibo qaab muuqaal ah oo kaliya la dhigo waxyaabaha soo socda. Aad ayey u adag tahay in maskaxdaas dhinac la isaga dhigo, xitaa waa naxdin U fiirso in barnaamijyada qaar aysan ku jirin dukaanka oo aadan aqoon sida loo rakibo, intaas kaliya maahan, isticmaalaha Windows-ka waxaa loo isticmaalaa inuu soo degsado barnaamijyadooda oo uu laba-gujinayo, halkan waa inaad dhigtaa qadka amarka si aad u rakibto barnaamij. Waxaas oo dhami way fududahay laakiin way ku kacaysaa marka hore, waxaa jira xoogaa iska caabin ah
Hadda waxaa laga yaabaa inaan ka tagay mawduuca xD, laakiin waxa aan tegayo ayaa ah in isticmaale xiise u qaba inuu wax barto uu si fudud u sameyn doono xitaa haddii marka hore ay tahay safar. Laakiin aniga ahaan dhibaatada salka ku haysa maahan taas, haddii aysan ahayn isticmaaleyaasha kale ee doonaya inay fududeeyaan kombuyuutarka oo ay furaan xafiiska ama barnaamijyadooda ay jecel yihiin, ma dhiirrigelin kartid GNU / Linux haddii ay tahay inaad u sheegto dadkan inay baranayaan mar labaad, ama in barnaamijka aad ugu jeceshahay uusan jirin oo ay jirto mid kale oo runtii ka fiican laakiin loo maareeyo si ka duwan, waxa dhici doona waa waxa hadda iminkaba dhacaya oo ah saamiga Linux ee hooseeya, fikradahaas awgood.
Waxaan u maleynayaa in fursadaha badan ee ay leeyihiin adeegsadayaashu, ay ka sii fiican tahay, kan doonaya inuu wax barto, ha u barto, kan aan baran, sababtoo ah waxaa si fudud loogu baahan yahay in loo fududeeyo inuu isticmaalo barnaamij kasta oo » wuxuu tixgeliyaa lagama maarmaanka »iyada oo loo marayo Linux, dabcan had iyo jeer si macquul ah. Tan ayaynu ku wada guuleysaneynaa, waxaan haysannaa isticmaaleyaal badan oo adeegsanaya Linux, waxay u badan tahay in adeegsadayaashaas, oo guryahooda Linux ku jira ku rakiban oo ay u qaabeeyaan dhinacyo saddexaad, waxay leeyihiin ilmo, ayeeyo ama abti iyo inuu isagu bilaabi doono inuu sidan iyo bilaw inaad ku iftiimiso kombuyuutarka gurigaaga. Sidaa darteed, tani waa sida saameynta magacaaban ee sii kordheysa isticmaaleyaasha loo fuliyo.
Jawaab Charly Jum
Meel Furan Mac: Codsiyada Isha Furan ee Mac
Taringa, Yonkis Series iyo Yonkis Movies ayaa ku lug lahaa sababta keentay Megaupload